Mashandisiro Aungaita Yevatengi Rwendo Rwekuongorora Kuti Ugadzirise Yako Kudiwa Generation Kushambadzira Kuedza | Martech Zone
Kugadzirisa yako kuda chizvarwa kushambadzira kuyedza zvinobudirira, unoda kuoneka mune nhanho dzese dzenzendo dzevatengi vako uye nzira dzekutevera nekuongorora yavo data kuti unzwisise izvo zvinovasunda izvozvi uye mune ramangwana. Unozviita sei? Neraki, mutengi rwendo rwendo analytics inopa zvakakosha kukoshesa kune vashanyi vako 'maitiro maitiro uye zvaunofarira mukati mevose rwendo rwevatengi. Aya mazano anokutendera iwe kuti ugadzire kwakasimudzira vatengi zviitiko zvinokurudzira vashanyi kuti vasvike kumagumo mune yako yekutengesa fanera.
Chii chaizvo chinonzi rwendo rwevatengi rwendo, uye ungarishandisa sei kukwidziridza matekiniki ako ekutungamira echizvarwa? Ngationei.
Chii chinonzi Rwendo rweVatengi Rwendo?
Mutengi rwendo rwendo analytics iko kunyorera kunoongorora zvakajeka nzendo dzevatengi. Ichi chishandiso chinosanganisira kuteedzera uye kuongorora mashandisiro anoita vatengi vako makwara akasiyana-siyana kusangana nechako chiratidzo. Inoongorora nzira dzese - dzinoshandiswa parizvino uye mune ramangwana - kuti vatengi vako vanobata zvakananga.
Iyi migero inogona kusanganisira:
Mikana ine kudyidzana kwevanhu, senge nzvimbo dzekufonera
Nzira mbiri dzekudyidzana, senge kuratidza kushambadzira
Mikana inogadziriswa zvizere, senge nhare mbozha kana mawebhusaiti
Yechitatu-bato inoshanda migero, senge yakazvimirira zvitoro zvitoro
Mikana inopa hupenyu hwevatengi rubatsiro, senge yekubatana saiti yekushambadzira kana mhenyu chat
Nei Ndichida Vatengi Rwendo Rwekuongorora?
Kunyangwe mafambiro evatengi akakura achiwedzera kuomarara, vatengi vemazuva ano vanotarisira kudyidzana kwavo kwebhizimusi nechiratidzo chako - munzira dzakawanda - kuti dzienderane nevatungamiriri veCX vakaita seAmazon neGoogle. Kana mafambiro evatengi vako asina musono nhanho dzese dzenzira, vanozove vasina kugutsikana uye nekukurumidza vanoenderera kumukwikwidzi. Ukuwo, zvidzidzo zvinoratidza izvozvo zviitiko zvakanaka zvevatengi kutyaira kwemari kukura.
Zvidzidzo zvakare zvinoratidza kuti kudyara muvatengi mhinduro manejimendi hakuna kukwana kuti uvandudze ako maCX mazinga. Kukundikana uku kunokonzerwa nenyaya yekuti mhinduro inowanzo bvunzwa pazvibodzwa parwendo. Nehurombo, izvi zvinoreva kuti chete rwumwe rwendo rwevatengi rwunotorwa, zvichimirira zvisizvo zviitiko zvevatengi vako.
Iyi data isina kukwana inoderedza kugona kwako kuwana mufananidzo uzere uye ruzivo rwakakwana mune yako nzira yekushambadzira kuita. Izvo zvakare zvinokusiya iwe pamukana wekusimudzira zviitiko zvevatengi uye kusunga vatengi zviitiko kune zvinooneka zvebhizinesi mhedzisiro.
Mutengi rwendo rwendo analytics izambuko pakati pevatengi vako maitiro uye ako bhizinesi mhedzisiro. Iyo yevatengi rwendo rwendo analytics inoita kuti rako bhizinesi kuteedzera, kuyera uye kugadzirisa zviitiko zvevatengi pane akati wandei ekubata uye nguva dzenguva, inosanganisira iyo yese yevatengi rwendo.
Kusimbisa vatengi rwendo rwendo analytics inogonesa chinodiwa chizvarwa chekushambadzira vatungamiriri kupindura mibvunzo yakaoma, yakadai se:
Chii chinokonzera maitiro evatengi vedu?
Ndedzipi hukama hwekare kana nzendo zvakaitwa nevatengi vedu zvakavatungamira pano?
Ndedzipi nzira dzinoitwa nevatengi vedu panzendo dzavo?
Ndezvipi zvingangoguma zvaitika kune mumwe nemumwe mutengi kana rwendo?
Idzi nzendo uye mhedzisiro zvinokanganisa sei mibairo yebhizinesi redu?
Ndezvipi zvinangwa zvevatengi vedu?
Zvinangwa zvavo zvinowirirana sei nezvinangwa zvedu zvebhizinesi?
Isu tinowedzera sei kukosha kweumwe neumwe mutengi uye nekuvandudza ruzivo rwevatengi?
Ndeapi mabhenefiti eVatengi Rwendo Rwekuongorora?
Mutengi rwendo rwendo analytics chinhu chakakosha chinongedzo mune inoshanda yevatengi rwendo rwendo manejimendi. Icho chidimbu chinoongorora yakazara data uye inogadzira inoitika inoitika. Iko kunzwisisika kunowanikwa kubva kune urwu rudzi rwevatengi manejimendi chirongwa kwakakosha kune vese vatengi uye mabhizinesi zvakafanana. Heano maitiro.
Yakagadziriswa Vatengi Zviitiko (CX) - Iwo iwo maonero akawanikwa kuburikidza neanoshanda ongororo yeako vatengi 'nzendo zvinokugonesa kukwidziridza nhanho imwe neimwe munzira yekuita isina musono hwakazara ruzivo.
Kuenderera Mberi Kunoyerwa Performance Mhedzisiro - Uyezve, kuenderera mberi analytics inokutendera iwe kuenderera nekuyera kudiwa kwechizvarwa kushambadzira matanho 'maitiro munzira dzakawanda uye kutsanangura maKPI akakodzera kuyera rwendo rumwe nerumwe.
Dhata Inoongorora Kubva kuNhamba Dzakawanda uye Nguva dzeNguva - Paunotarisa nzendo dzevatengi munzira dzinoverengeka uye nenguva, marwadzo echokwadi anoonekwa. Kuziva aya marwadzo ekugonesa kunoita kuti iwe utore matanho uye nekukanganisa mafambiro evatengi vako.
Ndingaite Sei Kuti Ndigadzirise Vatengi Rwendo Rwekuongorora? - Yevatengi rwendo rwendo analytics inowanzo gadziridzwa nevatungamiriri mukushandira vatengi, analytics, kushambadzira uye CX. Vatungamiriri ava vanotora mutengi rwendo rwendo analytics mapuratifomu kuvandudza yavo yekuda yekugadzira nzira dzekutengesa uye kuita kuyerwa kugona.
Aya mapoka anokwidziridza rwendo rwevatengi analytics ku:
Amass yevatengi rwendo rwendo
Gadzirisa akawanda-chiteshi mutengi kuzivikanwa
Ongorora kusangana kusingaverengeke mukati maisingaverengeke emuchinjikwa-chiteshi nzendo
Ziva CX marwadzo mapoinzi uye ayo anokonzeresa
Tarisa uone zvingangodaro rwendo rwevatengi rwendo
Gadzira CX investments 'ROI
Yevatengi Rwendo Mepu vs. Yevatengi Rwendo Rwekuongorora
Seye anodiwa chizvarwa mushambadzi, iwe unogona kunge watoita yevatengi rwendo mepu uye unzwe kuti inopa iwo iwo maonero akafanana neayo vatengi rwendo rwe analytics. Nehurombo, izvi hazvisizvo. Nepo kufamba kwemepu kuchinyatso tarisa kuhunhu hwehunhu, rwendo rwevatengi analytics rwakawandisa uye runosanganisira chiyero chakakura kwazvo.
Static Snapshots vs. Inoenderera Ruzivo - Mepu yerwendo inopa chete zvimisikidzwa zvezvimwe zvevatengi vevatengi vako uye haina ruzivo runodiwa kuratidza huwandu hwevatengi vako uye nehunhu hwavo hwakasiyana.
Yakatsiga vs. Nguva-Yakavakirwa Dhata - Rwendo rwevatengi analytics runotungamirwa neiyo-yakavakirwa data, ichikubvumidza iwe kuti uone kuti mafambiro evatengi anochinja sei nekufamba kwenguva. Iko kugona kuenderera nekuyera yakaoma yakawanda-chiteshi yevatengi nzendo uye ekubata nzvimbo parwendo dzinobatsira vashambadzi kufanotaura rwendo rwevatengi kubudirira.
Kuedza uye Kukanganisa vs. Yechokwadi-Nguva Kuedzwa - Pasina kuoneka kumusoro-kune-dhata dhata pane yega yekudyidzana parwendo rwevatengi, mabhizinesi anosara kuti aedze nezvitsva zvinowedzerwa parwendo rwevatengi rwese. Izvi hazvingori izvo zvingangopedza nguva nezviwanikwa, zvinoreva kuti vashambadzi vachange vakamirira mhedzisiro yakaunganidzwa isinganongedze kuti pane nyaya kupi.
Mutengi rwendo rwendo analytics inopa vashambadzi nekuonekwa kuti vaone kuti vatengi vanopindura sei kuvandudzwa pamwe akati wandei ekubata uye nguva dzenguva. Uye zvakare, ichi chishandiso chinogonesa vashambadzi kuyedza uye kuteedzera kubudirira kwevatengi ruzivo rwekudyidzana kuvandudza mune chaiyo-nguva.
Inotungamirwa nemuchina kudzidza uye AI, vatengi rwendo rwendo analytics inogonesa vashambadziri kuti vaone marwadzo poindi parutivi rwese rwevatengi rwendo runokanganisa CX. Aya maonero anotendera mabhizinesi anotungamirwa nedatha kuisa pamberi mikana yekushambadzira rwendo rwevatengi uye kutyaira kwemari kukura.
Unoda kuburitsa 30-50% imwe pombi mumazuva makumi mapfumbamwe?
Tags: maitiro evatengivatengi vanozivavatengi zvituparwendo rwevatengikuongorora kwevatengi rwendomutengi rwendo rwendo analyticsmutengi rwendo rwendo analytics mabhenefitiyevatengi rwendo mepucxkuda chizvarwakuda kudhinda chizvarwafunnelenvykuwanda-chiteshi ongororokukura kwemarichii chinonzi rwendo rwevatengi analytics